Monaco oo shaacisay lacagaha ay ku doonayso in looga iibsado Radamel Falcao & Kooxaha uu bartilaameedka u yahay – Gool FM
(Monaco) 03 Maajo 2019. Kooxda Monaco ayaa la soo warinayaa inay shaaca ka qaaday lacagaha looga iibsan karo laacibkeeda Radamel Falcao.
Naadiga reer France ee Monaco ayaa la soo sheegayaa inay duldhigtay Radamel Falcao adduun lacageed dhan 21.5 milyan oo gini haddii ay Inter Milan doonayso inay la wareegto Weeraryahankan.
Xiddiga xulka qaranka Colombia ayaa labo gool dhaliyey kulankii Arbacadii ay barbaro 2-2 la galeen Rennes, taasoo ka dhigan inuu xilli ciyaareedkan 15 gool ka dhaliyey 29 kulan oo uu ciyaaray horyaalka Ligue 1.
Falcao ayaa xan lagu helay inuu maamulka sare ee Monaco u sheegay inuusan doonayn inuu sii joogo xilli ciyaareed kale, laakiin Don Balon inay haatan rabaan inay dhagaystaan dalabyada u imaanaya laacibkan.
Yeelkeede, kooxda ku ciyaarta maaliyadda cadaanka iyo casaanka ayaan u ogolaan doonin 33-sano jirkaan inuu lacag raqiis ah ku baxo, waxaana laacibkan uu bartilaameed sare u yahay naadiga Inter Milan ee dalka Talyaaniga oo doonaysa inay bedel kaga dhigato Weeraryahankeeda Mauro Icardi.
Kooxda ka dhisan horyaalka Premier League ee Wolverhampton Wanderers ayaa sidoo kale la la xiriirinayay Falcao muddooyinkii la soo dhaafay.